Chii chinonzi Apple One? Hechino Chokwadi! - Payette Pamberi - Iphone
yangu yekubata skrini haisi kushanda
sei mameseji angu achibuda muhurongwa
chii * 67 chinoita pa iphone
iphone haibatanidzi kuchitoro cheapp
Chimwe chezviziviso zvinonakidza zvakabuda mu Gunyana Apple Chiitiko yaive Apple One. Apple Imwe isingaenzaniswi sevhisi yeApple iyo inobvumidza vashandisi kubatanidza yavo Apple ecosystem kunyatso nyatso. Muchikamu chino, ini ndichakuudza Zvese zvaunoda kuti uzive nezve Apple One !
Apple One, Yakatsanangurwa
Apple One ndeye Apple's nyowani yekunyorera sevhisi, iyo inobvumidza vashandisi kuwana kune akati wandei avo anozivikanwa midhiya maapplication uye zvirongwa zvemumwe chete pamwedzi mubhadharo. Apple One ichave iripo zviri pachena kuruzhinji mushure mekudonha uku.
Iyo Apple Imwe kunyoreswa kunosanganisira kuwana kune yakasunganidzwa musanganiswa weyakare uye nyowani Apple masevhisi. Parizvino, Apple One inosanganisira Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade, iCloud, Apple News +, uye iyo itsva Apple Fitness +. Kunyangwe iwe uri wevaraidzo nerd kana mutambi akakomba, iwe unowana nzira yekubatanidza nyore mashoma kana ese eaya masevhisi muhupenyu hwako hwezuva nezuva neApple One.
Tarisa uone yedu imwe vhidhiyo kuti uone zvimwe zvakaziviswa naApple padivi peApple One!
Chii Chandinoda Kuti Ndishandise Apple Imwe?
Kuti usayine kunyorera kweApple One, zvese zvaunoda iApple ID uye chero chinhu chimwe cheApple. Nekudaro, kana iwe uchinge watobatanidza akawanda Apple zvigadzirwa mune yako tech ecosystem, unogona kunakirwa neako Apple One kunyorera pane ese avo!
Chero ani ane iPhone, Mac komputa, iPad, Apple Watch, kana Apple TV anogona kusaina Apple One uye kushandisa yega yega maficha zvizere.
Yakawanda Sei Inodhura Apple Imwe?
Kune matatu mapakeji anowanikwa kune Apple Imwe kunyoreswa: Mumwe nemumwe, Mhuri, uye Premier.
Iyo Apple One Individual chirongwa chinobvumira vashandisi kuwana Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade, uye 50 GB yeICloud kuchengetedza kwe $ 14.95 pamwedzi.
Kwe $ 19.95 pamwedzi, Apple Imwe Mhuri inobvumidza vashandisi kuwana kune ese iwo masevhisi seyeMumwe munhu kunyorera, pamwe nekuwedzera 150 GB yeICloud yekuchengetedza. Chero ani ane Apple One Mhuri kunyorera anogona kupa mukana kune ese aya masevhisi kune vakawanda sevamwe vanhu vashanu.
Iko kunyoresa kweprimiyamu kwakawanda kuri Apple One Premier. Pamubhadharo wemwedzi wega wega we $ 29.95, vanyoreri vanowana mukana kune ese masevhisi anowanikwa muzvirongwa zveMunhu neMhuri, pamwe neApple News +, Apple Fitness + uye yakazara 2 TB yekuchengetedza iCloud
Apple iri kupa yemwedzi mumwe-yemahara muedzo kuti iwe ugone kudzidza kana iri yakanaka yakakodzera iwe. Pakupera kwemwedzi, kunyoreswa kunozongomutsiridza asi wakasununguka kukanzura chero nguva.
Apple Imwe: Yakasunungurwa
Apple Imwe ndiyo yakanyanya kunyoreswa yedhijitari Apple yakambopa. Vashandisi vanogona kugara vachifambidzana nenhau dzichangoburwa, teerera kumimhanzi, chengetedza matani emafaira, uye zvimwe zvakawanda mari yepasi pamwedzi. Kana iwe uchitsvaga nyore kuwana ruzivo, varaidzo uye kurudziro kwese kwaunoenda, ungangoda kusaina Apple One painoburitswa gare gare gore rino.